Rutsva Rwenyorwa Rangu "Yangu Chill Mix" Inoonekwa Kune Vamwe Apple Vashandisi Vemimhanzi | IPhone nhau
Apple inoda yavo yekushambadzira mimhanzi sevhisi, inozoshandura makore ayo ekutanga eChishanu svondo rinotevera, kuti ive sevhisi yemimhanzi yesarudzo yemunhu wese, vese iOS nevashandisi veApple, uye nekuda kweizvi inovavarira kuivandudza zvichiramba, zvese nezvirimo zvitsva uye nezvitsva masevhisi uye akanyorwa mazita akasarudzika senge iri kutotanga "kuoneka" pane zvishandiso zvevamwe vashandisi.
Mumazuva ekupedzisira, Vamwe vevanyori veMusic Music vatanga kuona runyorwa nyowani ruchioneka mu "Yako" tab yekushandisa inonzi "My Chill Mix" Uye zvirinani, zvaisazove zvekuwedzera kuwedzera kune iOS 11, asi zvaizoonekwawo pamidziyo ine iOS 10.
1 Mimwe mimhanzi kune yako yaunofarira paApple Music
1.1 Ndeupi mutsva "My Chill Mix" runyorwa?
2 Kwakatangira "My Chill Mix"
Mimwe mimhanzi kune yako yaunofarira paApple Music
Kubva pane izvo zvatinoona kubva pama skrini akambogoverwa, iyo nyowani tsika yekutamba haina rondedzero parizvino sekunge zvinoitika nemitambo yekutamba "Yangu Favorites Sanganisa" uye "Yangu Nyowani Musanganiswa Musanganiswa", zvisinei vamwe vashandisi vanga vatove vachiteerera kuReddit mhando yemumhanzi yainosanganisira. Uye kuti uzvinzwisise, hapana zvirinani pane kuita enzaniso neyeakasarudzika playlists iyo iyo Apple Music sevhisi yatopa.
Parizvino, iyo "Yangu Favorites Sanganisa" playlist (iyo inovandudzwa Chitatu chega chega) inopa vanyoreri runyorwa rwe nziyo dzavanoteerera zvakanyanya, nepo "My New Music Mix" playlist (iyo inovandudzwa Chishanu choga choga) ichikurudzira nhevedzano yemimhanzi iyo inofanidza kuravira kwekuteerera kwemushandisi, asi neyakaenzana iyo mimhanzi ichangoburitswa paApple Music.
Ndeupi mutsva "My Chill Mix" runyorwa?
Zvakanaka, zvichibva pane zano reaya maviri apfuura mazita, iyo nyowani yekutamba "Chill Mix yangu" yakafanana neiyo "Yangu Nyowani Musanganiswa Musanganiswa" rondedzero, zvisinei, mune yekupedzisira kesi mutemo wekuti mimhanzi yakasarudzwa inofanira kusangana nematanho ekuburitswa ichangoburwa inonyangarika.. Izvi zvinoreva kuti nerunyorwa urwu rutsva, vanyoreri vanozogona kuteerera kumimhanzi inokodzera zvavanofarira zvemimhanzi (sezvazviri maererano nenhoroondo yavo yekuteerera) zvisinei nekuti nziyo dzinosanganisirwa ndedzitsva kana diki.
Sezvineiwo, runyorwa nyowani "My Chill Mix" yaigadziridza zvirimo vhiki nevhiki Svondo yega yega. Vamwe vashandisi vanga vasati vaona playlist mune yavo Music app vakabvunza Siri kuti vairidza vachiti, "Siri, tamba My Chill Mix," uye vamwe vakaona izvi zvichishanda. Saka, kana usiri kuzviona izvozvi, edza kuti uone kana zvichikushandira iwewo.
Iyo Cupertino kambani pachayo yakatsanangura iyo nyowani tsika mimhanzi playlist "My Chill Mix" seinotevera: "Yakagadziridzwa kune ako emumhanzi kuravira, My Chill Mix isarudzo yenziyo dzekukubatsira kuzorora".
Kwakatangira "My Chill Mix"
Iyi nyowani nyowani yakatanga kuoneka paiwatchOS 4 peji rekutarisa mushure memhemberero yeWorldwide Developer Congress kutanga kwaJune, seimwe yenyaya dzekutamba idzo ichaenderana neApple Watch. Asi mushure meiyi "slip", zvese zvakataurwa nezve playlist "My Chill Mix" yakabviswa pawebhusaiti yekambani.
Iwo playlists "My New Music Mix" uye "My Favorites Mix" yakatanga kuoneka muIOS 10 yeruzhinji beta munaGunyana apfuura, mwedzi mishoma mushure meWWDC 2016, panguva iyo Apple yakazivisa zviri pamutemo kuuya kunotevera kweizvi zvinyorwa zvemitambo zvemumhanzi zvakagadzirirwa kuravira uye maitiro emumwe mushandisi.
Kunze kweizvi zvitsva zvinyorwa, zvakare Zvimwe zvinhu zvitsva zvinotarisirwa kuApple Music muIOS 11, Sarudzo ye share playlists neshamwari dzako uye uone zvinyorwa zveshamwari dzako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Rutsva runyorwa "My Chill Mix" inoonekwa kune vamwe vashandisi veApple Music